ညိုထက် (လမ်းသစ်ဦး) ● ဒီကနေ့ မှတ်တမ်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ဘ၀ရဲ့ အဆင်မပြေခဲ့မှုတွေကို တွေးမိရာက အစောကြီးနိုး
ဗိုက်ဘာက ခေါ်လေ့ရှိတဲ့ ချစ်သူနဲ့စကားပြော
အဲ့ဒီ ၀တုတ်ကို တွေ့တာနဲ့ ပြေးဖတ်မိမယ်လို့ ချစ်သူကပြော
အဲဒီ သေးသေးသွယ်သွယ်လေးကို ကိုရီးယားကားတွေထဲကအတိုင်း ကုန်းပိုးပေးမယ်လို့ ချွဲ
ဆေးလိပ် ထသောက်တော့ ပိတုန်းလေးတကောင် ၀ဲနေတာတွေ့ရ
အဲဒါနဲ့ အဲ့ဒီပိတုန်းလေးကို မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကြိုဆို
အဲဒီလိုနဲ့ ဘာရယ်မသိ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရမိ
အဲဒီလိုနဲ့ ကြည်ဖြူကို ငယ်သူငယ်ချင်း အေးသန္တာလင်းနဲ့တူကြောင်း CB က တဆင့်ပြောမိ
(ဆိုင် မဆိုင်တော့မသိ။ နည်းနည်းတူသလိုလိုရှိတာနဲ့ ပြောလိုက်မိ)
အဲဒီလိုနဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရမိ
အဲဒီလိုနဲ့ ပန်းအိဖြူရဲ့ သီချင်းတွေကို နားထောင်
မြတ်စွာဘုရား – တနေ့ နင် ငါ့လို ငိုရမယ်တဲ့ သီချင်းအမည်
အဲဒီ သီချင်းတွေ့မိရာက FB မှာ စတေးတပ်ရေးလိုက်မိ
အတွေးထဲ အဲဒီ စတေးတပ်ကို ကဗျာအဖြစ်ရေးဖို့ ၀ိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းကြ
ဘီယာငှဲ့ပေးမယ့်သူ မရှိသေးကြောင်း သတိရလာ
ဘုရားရေ …. ညီမလေးက သနပ်ခါးကြိုက်သတဲ့
အင်တာနက်ရရင် ဖုန်း အလိုလို ပွင့်တယ်ညီမလေး
(မာဘိုလို တဘူးတဆယ်။ ဆေးလိပ်က ဈေးကြီးတယ်လို့ ပြောဖူးတဲ့ လေဒီဝမ်းကိုသတိရ)
ဆေးလိပ်က မကွာဘူး ကိုလေးလို့ ကျနော့်ညီအငယ်ကောင်က ပြော
လေဒီဝမ်းတို့ သားအမိ ကျောင်းတက်နေတဲ့အကြောင်း
တို့ဗမာဟေ့ …. တို့ဗမာ
မညှိုးဂုဏ်တေဇာ များစွာပ တိုင်းများကိုပါ တိုက်ခိုက်ခါ အောင်ခဲ့တာ
မြိုင်သာယာက ဘင်ဂျိုသံတွေ ဝေေ၀စီစီ ပွင့်လန်းနေပေါ့
ဗမာပြည်နဲ့ ဗမာပြည်သားတွေအကြောင်း စူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့ ကျနော့်အကို အသစ် အစစ်
ကျနော်က တခါတလေ ကြောင်တယ်
ကျနော် ဘလော့ခ်ထားတဲ့ ကျနော့်ရဲဘော်တွေကို ပြန်ပြီး အက်
အတော်များများက ကျနော့်ကို ပြန်လည်လက်ခံကြ
ဗိုလ်သစ်ကို သတိရမိတော့ ဆရာဂျမ်းကို သတိရမိ
(ဆရာဂျမ်းက ဗိုလ်သစ်ကို သောက်ကောင်းအိမ်လို့ အမည်ပေးဖူး)
(ဘော်ဒဂါ တပုလင်း ၁၇ ဒေါ်လာ။ ကျနော် တက်နိုင်တာ ဒီလောက်ပဲရှိတယ်)
ဘော်ဒဂါကို အမ်မလွဲဟတ်စိနဲ့ ရောသောက်
(အမ်မလွဲဟတ်စိ တကပ် ၈ ဒေါ်လာ)
ခရမ်းပြာနိုးထခြင်း စကားတလုံး ကျနော့်ကို ပေးအပ်ခဲ့ဖူးတဲ့လူ
အရက်ရဲ့ အရောင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ ဘော်ဒဂါ အစိမ်း
ဘဏ်ကဒ်ထဲ ၇ ဒေါ်လာသာ ရှိတော့သည်
၁၅ – ၆ – ၂၀၁၆
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● စာဖတ်ခိုင်းကြရုံပဲလား https://t.co/ULDAbMv1wV https://t.co/Em3igEsdnj about 19 minutes ago ReplyRetweetFavorite